Ny paikady varotra mifototra amin'ny kaonty no ho avy, ary eto ny Groove | Martech Zone
Alarobia, Febroary 7, 2018 Alarobia, Febroary 7, 2018 Chris Rothstein
Raha miresaka momba ny varotra rindrambaiko SaaS, dia maodely iray amin'ny fahombiazana ny olona mikendry manokana. Sady koa anie, olona 5.4 eo ho eo dia mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra momba ny varotra orinasa tokana. Raha jerena fa ny fitsirihana ny tarika dia ny mahazatra, varotra miorina amin'ny kaonty (ABS) mahomby kokoa noho ny mikendry fitarihana manokana.
Ny fomba mifototra amin'ny kaonty amin'ny fivarotana kosa dia mety handany fotoana. Ny fanarahana metrika sy fandaharam-potoana lalindalina amin'ny tanjona kendrena maro, ary koa ny fiaraha-miasa amin'izany vaovao izany manerana ny ekipa anatiny, dia mahatsapa fa tsy ho vita mihitsy raha tsy mahay mandamina solosaina tahaka ianao. Ny vahaolana? Fivarotana mandeha ho azy.
Nandritra ny androko niasa tamin'ny varotra tao amin'ny Google dia hitako fa te hanana mpanampy manan-tsaina izay hanara-maso ny fandaharam-potoana, ny lamina ary ny fampahatsiahivako rehetra nefa tsy mila mandidy azy aho. Farany, nila zavatra aho hanampy ahy hahita ny lalan-kalehako mba hahafahako mijanona miasa amin'ny endrika maha-olombelona amin'ny fivarotana. Tamin'izany no teraka ny Groove, ilay sehatra fampandehanana varotra.
Inona no azonao atao amin'ny Groove
Amin'ny fanaovana ny fizotry ny varotra ho tsotra sy marani-tsaina kokoa, Groove dia manaparitaka ny fahaizany ho sehatra telo. Amin'ny alàlan'ny fandefasana automatique ny asan'ny mpitondra fivavahana tsy misy saina amin'ny dingana rehetra amin'ny dia, ny Groove koa dia misambotra angon-drakitra manan-danja hanampiana anao hivarotra hendry kokoa amin'ny ho avy, indrindra ho an'ireo izay manaraka ny paikadin'ny ABS.
Sync: Fantaro izay mitranga rehetra eo amin'ny tontolon'ny varotrao
Ny tsingerin'ny varotra dia lava kokoa amin'ny ABS, ary midika hoe metrika maro kokoa ny manara-maso mandritra ny fotoana maharitra. Mba hitazomana ny mason'ny vorona ny fizotrany rehetra, ny fanarahana sy ny famakafakana ny metriky tsara sy haingana dia fanalahidy.
Groove dia misambotra ireo metrikan'ny fanentanana ataon'ny fikambanana iray manontolo, isaky ny mailaka nalefa sy voaray isaky ny antso voaray ary niverina. Ny fakana an'ity data ity dia ahafahan'ny Groove mamantatra izay paikady fanentanana mahomby indrindra hahatratrarana ny vinavinanao.
Araka ny fomban-drazana, ny matihanina amin'ny varotra dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra tonga saina hanangona izany angona izany ary handany fotoana hamantarana izany hahitana izay paikady sy fe-potoana mety indrindra. Sarobidy ny fomba fijery azony omena, saingy tsy mendrika izany ny fampiasam-bola. Ny Groove dia mandany ny fandaniam-potoana tsy misy amin'ny fanontaniana ary mamela ny matihanina mivarotra hamirapiratra amin'ny paikady avo lenta raha mitantana ny famakafakana granular.
Mikoriana: Mandehana dingana tsy miovaova
Ny laharam-pahamehana dia zava-dehibe raha ny ABS no resahina noho ny habetsaky ny fotoana sy loharanom-pahalalana ilainy. Ireo matihanina amin'ny varotra dia tokony ho afaka misafidy izay fampielezan-kevitra sy fikambanana tadiavin'izy ireo ho laharam-pahamehana amin'ny fanatontosana azy ireo, saingy miaraka amina fikambanana maro kendrena indray mandeha dia mora ny tototry ny fotoana ifanarahan'ny samy hafa.
Groove dia miady amin'ny tolona amin'ny alàlan'ny fahaizany mandrindra ny dingana azo averina. Ny endri-javatra dia mamela anao hamorona fitsipika fampahatsiahivana mandeha ho azy amin'ny fifandraisanao amin'ny vinavinanao. Ohatra, azonao atao ny milaza amin'ny rafitra hoe, "Isaky ny mitarika kaonty isaky ny mifantoka amin'ny kaonty, ampahatsiahivo aho hahatratra dimy andro aorian'ny hidiran'izy ireo ao amin'ny rafitra, ary ampio izy ireo ao amin'ny LinkedIn dimy andro aorian'izay," mandra-panaonao ny rafitra rehetra tafiditra ao ny rindrambaiko. Raha tokony handany fotoana hamenoana ny fampahatsiahivanao iPhone na ny Kalandrie Google ianao dia mampihatra ny lalàna ho anao isaky ny mitarika vaovao i Groove.
Fandaharam-potoana: Ampiasao ny famokarana madio
Arakaraka ny isan'ny olona manao varotra no vao mainka handresy lahatra ny saina. Noho izany, mbola zava-dehibe kokoa aza ny fananana fotoana hiarahana amin'ny olona tsirairay tafiditra mba hahafahanao mampifanaraka ny hafatrao amin'ny fahalianan'ny tsirairay. Raha tsy misy fitaovana fanomanana fandaharana marani-tsaina, fotoana be sy mailaka ilaina izany.
Ny famokarana an'i Groove dia manondro mivantana ny teboka fanaintainana. Ny mpanjifa dia afaka mahita ny kalandrieo sy ny fahafahanao manoratra fotoana mivantana. Io dia manapaka ny mailaka mandroso sy miverina hifanakalo hevitra momba ny safidin'ny fotoana, indrindra rehefa mikendry olona marobe amin'ny fikambanana iray izay tafiditra amin'ny varotra ianao.
Ny fahaizan'ny fandaharam-potoanan'i Groove dia mamela ny solo-potoana handefasana mailaka amin'ny fotoana mety indrindra ihany koa ary hijery rehefa hosokafana ny mailaka hahazoana hevitra momba ny firosoana. Ny tetikady dia azo ovaina arakaraka ny zavatra mandeha sy ny tsy mety, avelan'ny repoblika hahita ny fandanjalanjana tonga lafatra ary avy eo mandroso haingana kokoa amin'ny asan'izy ireo, manidy ny varotra bebe kokoa ary hahazo vola bebe kokoa.
Ahoana no mampiavaka ny Groove?
Groove no vahaolana tokana azo atao amin'ny varotra rehetra eny an-tsena izay azo ovaina ho an'ny ekipa mpivarotra anao rehetra. Na dia mihatra amin'ny ambaratonga iray monja amin'ny ekipanao aza ny ankamaroan'ny vahaolana, dia mampifanaraka ny andraikitry ny tsirairay ny Groove - manapaka ny filàna amin'ny fandaniana amina fitaovana maro samihafa sy amin'ireo mpiasa an-tsambo ho an'ny vaovao rehefa avo lenta izy ireo.
Ny fidirana an-tsambo ny fikambanananao mankany Groove dia dingana tsotra izay tsy maharitra mihoatra ny adiny roa. Amin'ny alalàn'ny fotoam-pampiofanana lalindalina, ny ekipanay dia afaka mampiseho anao ny fomba fanamboarana ny programa mifanaraka amin'izay ilainao. Tsy maninona na ny maherifonao dia 10 na 1,000 ny matihanina amin'ny varotra, ny fanamafisana dia fanandramana milamina.
Satria maro ny olona mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana SaaS, ny fomba fivarotana dia mila tsorina ho an'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Groove dia manana ny masony amina tontolon'ny varotra mifototra amin'ny kaonty mahira-tsaina ary maniry ny hanatanterahana izany.
Tags: ABSfivarotana miorina amin'ny kaontyGrooveFanamafisana ny varotrafivarotana fivarotanafantsom-pivarotanasalesforce
Chris Rothstein no CEO sy mpiara-manorina Groove.co, sehatra fifanakalozana varotra. Talohan'ny Groove.co, i Chris dia nanangana, nanatsara ary nitantana ekipa fivarotana orinasa ao amin'ny Google. Izy izao dia manampy amin'ny fitondrana haitao maoderina amin'ny tontolon'ny varotra ka ny tsirairay avy amin'ny ops fivarotana ka hatramin'ny talen'ny varotra dia afaka mandany fotoana bebe kokoa manome lanja ny mpanjifany sy ny orinasany.
Fomba fijery ny taom-baovao RSW / US Marketer-Agency 2018